Nhau - Kuongorora kwechikafu
Musi waChikunguru 28, 2020, iro rakakodzera dhipatimendi reShandong Provincial Chikafu neDrug Administration rakabvumidza wechitatu-bato kuyedza muviri, iyo SGS, yakanga yaongorora Limeng pharm's mhando manejimendi manejimendi, iyo yakavakirwa pasirese HACCP manejimendi system. Iwo mapurojekiti ezvekuwedzera zvekudya, emukaka mapoda uye gummy candy akaongororwa.
Mumazuva maviri, vechitatu bato nyanzvi vakapedza nzwisisika ongororo yehunhu manejimendi system. Zvemukati mekutarisa zvinosanganisira Hardware chivakwa uye software zvinyorwa. Nyanzvi dzisati dzatarisa zvigadzirwa, rabhoritari, mashopu, zvigadzirwa zvekugadzira, zvigadzirwa zvekugadzira, uye zvishandiso zvekuona.
Muchikamu che software, nyanzvi dzakaongorora zvinyorwa zvemafaira, uye zvinoenderana nezvinodiwa neHACCP, nyanzvi dzinonongedza akati wandei ezvinhu akakosha, ayo anoenderana nemaitiro eHACPP pane yakakosha yekudzora poindi uye mamwe mapoinzi. Imwe, zvinyorwa zvekudzidzisa, hutongi hwehutano uye mafaira ekuchengetedza akaongororwawo.
Vanoziva mazuva maviri ekubhadhara mari, nyanzvi dzeSGS dzakatambira mabasa edu mukugadzira uye manejimendi, uye vakatarisira kuti isu tigadzike zvirevo zvepamusoro pane maitiro ekugadzira uye manejimendi, zvinoenderana neHACCP.
Zvinoenderana nemhedzisiro yekudzokorora, kambani yedu yakaronga maneja makuru nevashandi kuti vagadzirise izvo zvisiri izvo, uye nekuona maitiro eHACCP mukugadzira. Wese munhu ane basa rekuona kuti zvigadzirwa zvedu zvine hutano uye zvinogamuchirwa nemusika nevatengi. Mukuita kwekusimudzira kweLimeng pharm, tinogara tichishandira pamwe nemasangano epasirese ekuyedza, senge SGS, BSI UK, TUV nemimwe miviri kuitira kuti yedu yekugadzira system iite basa chairo uye ive nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa nekukunze .
Post nguva: Oct-10-2020